Covid လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ မှုရှိခဲ့ပေမယ့် Swab Test စစ်ေ ဆးမှုမှာ NEGATIVE ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြတ်နိုးအေး - Myannewsmedia
မွငျသူရငျကို အေးခမျြးစတေဲ့ အပွုံးလှလှလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မွတျနိုးအေးကတော့ ရုပျရှငျနဲ့ ကွျောငွာတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျရငျး စတငျကွိုးစားနဆေဲဖွဈတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါပဲ။ တကျသဈစ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ အလုပျတှကေို ဆကျတိုကျလုပျနရေပွီဖွဈတဲ့ မွတျနိုးအေးက ဒီကနမှေ့ာတော့ အမနေဲ့ အဖိုးအပါအဝငျ အိမျသားတှေ Covid-19 ရောဂါပိုးရှိနတောကွောငျ့ Hotel Quarantine ဝငျနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ မွတျနိုးအေးက ပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ သူမရဲ့ Covid Swab Test စဈဆေးမှုအဖွကေို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ မွတျနိုးအေးက “Two good news for my NOELS ❣️Noels တှအေတှကျ သတငျးကောငျး(၂)ခုကတော့ – မွတျနိုးရဲ့ page လေး blue mark ရသှားတဲ့ အကွောငျးရယျ မွတျနိုး covid swab test စဈပွီးလို့ အဖွေ “NEGATIVE ” ထှကျတဲ့ အကွောငျးရယျပါ ❤️ ကနျြတဲ့ မိသားစုဝငျတှေ အားလုံးလညျး ကနျြးကနျြးမာမာရှိနပေါတယျ! အားလုံး ကနျြးမာရေးဂရုစိုကျကွပါနျော 😇” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ ပွောလာခဲ့ပါတယျ။
မွတျနိုးအေးကတော့ ကိုဗဈစဈဆေးမှုမှာ NEGATIVE ဖွဈခဲ့ပွီဆိုတဲ့အကွောငျးကို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနပွေီး ပွောလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီး လညျး မွတျနိုးအေးအတှကျ ထပျတူဝမျးသာနကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မြင်သူရ င်ကို အေးချမ်းစေတဲ့ အပြုံးလှလှလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြတ်နိုးအေးကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း စတင်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါပဲ။ တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင်တစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်နေရပြီဖြစ်တဲ့ မြတ်နိုးအေးက ဒီကနေ့မှာတော့ အမေနဲ့ အဖိုးအပါအဝင် အိမ်သားတွေ Covid-19 ရောဂါပိုးရှိနေတာကြောင့် Hotel Quarantine ဝင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ မြတ်နိုးအေးက ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ သူမရဲ့ Covid Swab Test စစ်ဆေးမှုအဖြေကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ မြတ်နိုးအေးက “Two good news for my NOELS ❣️Noels တွေအတွက် သတင်းကောင်း(၂)ခုကတော့ – မြတ်နိုးရဲ့ page လေး blue mark ရသွားတဲ့ အြေ ကာင်းရယ် မြတ်နိုး covid swab test စစ်ပြီးလို့ အဖြေ “NEGATIVE ” ထွက်တဲ့ အကြောင်းရယ်ပါ ❤️ ကျန်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးလည်း ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေပါတယ်! အားလုံး ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါနော် 😇” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
မြတ်နိုးအေးကတော့ ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုမှာ NEGATIVE ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မြတ်နိုးအေးအတွက် ထပ်တူဝမ်းသာနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous post ” ပြင်ဆင်မှုများစွာနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”
Next post ဆင်လေးေ တွကို ဆင်စာ ဘူဖေးကျွေးခဲ့တဲ့ သမီးကြီး ယွန်းဝတီလွင်မိုးနဲ့ သမီးငယ် ယွန်းနဒီလွင်မိုးရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ အလှူလေးကို မျှဝေလာတဲ့ လွင်မိုး